I-china DuoDuo Songa imithwalo yetroli DX3015 Isisindo esincinci seAluminiyam esinyibilikayo kunye nesiPhatho esisongelayo seDolly yomvelisi kunye nomthengisi | UDuoduo
I-DuoDuo Songa imithwalo yetroli ye-DX3015 engasindi iAluminiyam engafakwanga kunye nokuPhatheka ngokuSonga kwiDolly
Inombolo Umba: DX3015
Ubungakanani obuvuliweyo: 27.5x31x95CM
Ubungakanani obuSongiweyo: 39.5x27x8.5CM
Ubungakanani beplate: 27x22CM
Ubungakanani: 20 KGS
Package: 10pcs ibhokisi nganye
Ubungakanani beCarton: 55x42x29CM
Inqwelwana esongekayo yemithwalo, ilula kakhulu kwaye inokusongwa, inokufakwa kubhaka wakho.
Isitayile sangaphandle esinezinto ezinemigca ecocekileyo kunye nentlangano efihliweyo.
Umtya oxhase ii-anchors umthwalo kunye nokuthintela ukutshintsha.
Iivili ezirhabaxa ezingaphezulu kwamandla okuphatha kakuhle.
Umtya wenkxaso wolulela phantse kubude bayo obubini ukuze ubambe imithwalo yobungakanani obahlukeneyo.
Ifolda yokuhamba ngokulula kunye nokugcinwa. Ifolda yokugcina indawo encinci.
Yenza uMsebenzi wakho wokuHamba ngokuLula: Iivili ezirhabaxa ezingaphezulu ziyomelele kwaye zithe cwaka kakhulu ezenza ukuba kube lula ukuphatha nokuqhuba inqwelo.
Iintambo ze-Elastic: Iintambo ezakhelwe-ngaphakathi ezinde ze-Bungee Zolulela kubude obuphindwe kabini ukubamba ubuninzi bemithwalo eyahlukeneyo. Imixokelelwano yenkxaso ehlengahlengiswayo yempahla ye-anchor kunye nokuthintela ukutshintsha. Isiseko senziwe ngezinto ezomeleleyo nezomeleleyo ukuhambisa ngokukhuselekileyo imithwalo, iipasile, iibhokisi.
Ngaba usenzakalisa ukuba umthwalo unzima kakhulu? Ngaba usakhathazwa yimithwalo emininzi kuhambo lweshishini? Ngaba usacatshukiswa yingxaki yokuthenga ivenkile? Ufuna le mini yenqwelomoya ephathekayo esebenzayo, ulula ngokulula kwaye ubeke ubhaka wakho.
Kuxhomekeka kwisikhululo seenqwelomoya kunye nakwiinqwelomoya ohamba ngazo, kungafuneka ujonge inqwelo yakho yemithwalo kunye neesutikheyisi zakho. Ukuba awucwangcisi ukujonga naziphi na iibhegi, uya kufuna ukuqinisekisa ngenqwelomoya wakho ukuba ingaba inqwelo iya kuvunyelwa na ukuba ibe yimpahla yokuphatha. Ukwenza ukuhamba kancinci kube lula, unokufuna ukuqaphela ukufumana inqwelwana yokusonga imithwalo. Ezi zinto zenza ukuba ulungiselelo lokuhamba lube lula kakhulu. Icwecwe lokuSonga imithwalo eqinileyo, ulwakhiwo lobunzima, luyavula kwaye luvale ngemizuzwana ukubonelela ngokuhamba ngokulula. Iivili ezirhabaxa ezingaphezulu kwamandla okuphatha ngendlela ephucukileyo Imixokelelwano yee-anchor imithwalo kunye nokuthintela ukutshintsha ngokukhuselekileyo ukuhambisa umthwalo, iibhokisi, iipasile.
Egqithileyo I-DuoDuo yokusonga imithwalo yeetroli i-DX3013 enamavili aphathwayo Umsebenzi onzima weAluminiyam engenakubekwa imithwalo
Okulandelayo: DuoDuo Heavy Duty Isandla Iinkuphelostencils LH5001 Dual Handle Isandla Iinkuphelostencils
IAluminiyam yokusonga iTroli
Inqwelwana esongekayo yemithwalo
Songa imithwalo Sibona
Itroli esongekileyo engasongelwanga imithwalo
Itroli encinci yokugoqwa kwempahla
DuoDuo Ukusonga imithwalo netroli DX3007 / DX3008 Al ...
I-DuoDuo Songa imithwalo yetroli DX3009
DuoDuo Songa imithwalo netroli DX3005 nge Yongeza ...
DuoDuo Ukusonga imithwalo netroli DX3002 Ukusonga D ...